Barmuudo.com DEG DEG: Diyaarad Sida Dad Shacab Ah Oo Ka Duushay Muqdisho Toosna Ugu Wajahan Nairobi
Diyaarad sida dad shacab ah ayaa goor dhow waxay ka duushay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana diyaaraddan ay toos uga dageysaa magaalada Nairobi. Waxaa dhaqangalay heshiiskii dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ee ahaa in shacabka ka ambabaxaya magaalada Muqdisho aan la marsiin magaalada Wajeer, kadib Farmaajo oo la kulmay dhiggiisa Kenya. Diyaaradda maanta […]
Barmuudo.comMaamulka Puntland Oo Tallaabo Geesinimo Leh Ka Sameeyay Gaalkacyo Iyo Shacabkii Oo…
Maamulka Puntland ayaa Furay Wadooyinkii ku xirmay dagaalladii ka dhacay Magaalada Gaalkacyo ee ku yaalla Waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug. Duqa Waqooyiga magaalada Gaalkacyo Maxamuud Yaasiin Axmed ayaa ku dhawaaqay in dowlad goboleedka Puntland ay si rasmi ah ay u fureen Wadooyin ku xirmay dagaalladii Gaalkacyo. Waxaa uu tilmaamay in ay si shuruud […]
Barmuudo.comKenyatta oo maanta fulin doona heshiiskii uu la galay MD Farmaajo
Wararka aan ka heleyno Garonka Diyaaradaha Ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay tilmaamayaan in Maanta qorshuhu uu yahay Diyaaradii ugu horeysay ee ka dhoofta Muqdisho ay si toos ah u tagto Magaalada Nairobi Caasimadda Wadanka Kenya. Arintan waxay ka dambeysay kadib markii madaxda dowlada Soomaaliya iyo Kenya ay isku af garteen in Diyaaradaha Soomaaliya ka […]
Barmuudo.com xog: Xildhibaannada Abgaal Iyo Majeerteen Oo Go’aan Mid Ah Ka Qaatey Xukuumadda Kheyre
Xildhibaannada beelaha abgaal iyo sidoo kale Majeerteen ayaa go’aan isku mid ah ka qaatey golaha wasiirada cusub ee kheyre, kadib markii maalmahan dambe ay soo baxayeen mudanayaal diiddan xildhibaannadaasi. Labadan beel ayaa siyaabo kala duwan u sheegay iney codka meelamrinta siin doonaan golaha wasiirada cusub ee xukuumadda Kheyre, islamarkaana aaney marnaba kahor imaan doonin. Waxay […]
Barmuudo.comRW Xasan Cali kheyre oo Codsi Muhiim ah u diray Bahda Saxaafada
Ra’isul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa ka codsaday Saxaafada Soomaaliyeed iyo wariyaasha in ay si aad ah u faafiyaan wararka la xiriira Abaarta ka jirta Gobolada dalka. Isagoo sheegay in Warbaahinta Dalka ay tahay Muraayada kaliyaha ee leyska arko islamarkaana Wararka siyaasada la xiriira aysan tabinteeda xiligan aysan Muh.iim aheyn. Waxaa uu ku baaqay in […]
Barmuudo.comXOG-WARAN: Madaxweyne Farmaajo oo 5 Qodob udiyaarsaday Shirka Carabta & Wadamada Carabta oo…
Magaaladda Camaan ee dalka Urdun ayaa waxaa manta ka blaaban doona shirka wadamada Jaamacada Carabta oo ah kiisii 28-aad. Hadaba, madaxweyne Farmaajo ayaa khudbad ka jeedin doonta shirkaas isagoo ka hadli doona xaalada Soomaaliya gaar ahaan dhanka amaanka iyo faqriga, waxaa kale oo uu wadamada Jaamacadda Carabta ka dalban doonaa taageero toos ah. Arimaha uu […]
Barmuudo.comShirka Madaxda Wadamada Jaamacadda Carabta Oo Maanta Ka Furmaya Urdun Iyo Farmaajo Oo..
Shirka Hogaamiyeyaasha Jaamacadda Carabta ayaa Maanta ka furmaya caasimada dalka Urdun ee Cammaan ,waxaana ka qeyb galaya hogamiyeyaal badan oo ka socda Wadamada Jamacadda Carabta. Shirka qodobada looga hadlayo, waxaa ka mid ah Abaaraha ka jira Soomaaliya ,dhibaatooyinka ay la kulmayaan Falastiniyiinta, dagaalada ka socda Yemen. Warbaahinta caalamka oo soo xiganaysa madaxda ka tirsan Jaamacadda […]
Barmuudo.com wasiirada Kheyre Oo Maanta La Horgeynayo Baarlamaanka Federaalka
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ayaaa maanta la filayaa in xarunta Golaha shacabka ee Magaalada Muqdisho ay ku yeeshaan kulan, sida uu Warqaad u xaqiijiyay xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya. Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Federaalka C/wali Sheekh Ibraahim (Muudey) ayaa shir Guddoominaya kulanka, maadaama Guddoomiye Jawaari hada uu yahay ku simaha Madaxweynaha, kadib markii Madaxweynaha […]
Barmuudo.comAxmed Fiqi oo isku sharaxaya Madaxweynaha Galmudug, Olole ka bilowday Baraha bulshada
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ayaa qorsheynaya inuu isku sharraxo xilka Madaxweynaha Maamulka Galmudug, iyadoo uu wada tashiyo uu la leeyahay kooxdiisa iyo dhinacyo kala duwanIlo wareedyo ku dhow Mr Fiqi ayaa xaqiijinaya in maalmaha soo socda uu si rasmi ah u shaacin doono damaciisa xilka Madaxweynaha Galmudug. Munaasabad dhowaan ka […]
Barmuudo.comAkhriso: Maqaal uu qoray Madaxweynihii hore Xasan Sheekh (Soomaaliyey I Maqal)
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoray Maqaal uu cinwaan uga dhigay (Soomaaliyey I Maqal), kaasoo la soo gaarsiiyay shabakada wararka barmuudo.com Maqaalkan ayuu Madaxweynihii hore kaga hadlayaa sooyaalka taariikhda dhow ee dowladda dhisida Soomaaliya, mudadii bur burka iyo caqabadihii jiray, iyo talooyin uu jeedinayo. Hadaba halkan hoose ka akhriso Maqaalka uu qoray Madaxweynihii […]